फोटोकपी मेशिनको माग बढयो | गृहपृष्ठ
Home बजार फोटोकपी मेशिनको माग बढयो
फोटोकपी मेशिनको माग बढयो
भदौ ३१, काठमाडौं । सूचना र प्रविधिको विकास तथा कम्प्युटरको प्रयोगसँगै फोटोकपी मेशिनको व्यवसायमा वृद्धि भएको छ । कार्यालय, स्कूल, कलेज तथा अन्य संस्थाहरूमा फोटोकपी मेशिनको प्रयोग बढेपछि यसको व्यवसाय पनि बढेको हो । नेपालमा हाल वर्षको रू. १ अर्बबराबरको यस्ता मेशिन विक्री हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । महत्त्वपूर्ण सूचना तथा कागजातहरूको नक्कल वा प्रतिलिपि निकाल्न तथा स्क्यान, प\_mयाक्स, प्रिण्टलगायत कामका लागि यस्ता मेशिनको प्रयोग गरिन्छ । नेपाली बजारमा अहिले कलर तथा ब्ल्याक एण्ड व्हाइट डिजिटल फोटोकपी मेशिनहरू उपलब्ध छन् । डिजिटल फोटोकपी मेशिन सन् २००० मा नेपालमा भित्रिएको हो । यस्ता मेशिनहरूको मूल्य न्यूनतम रू. ७५ हजारदेखि अधिकतम रू. १ लाख ५० हजारसम्म पर्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ । फोटोकपी मेशिनको क्षमताका आधारमा यसको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । उच्च क्षमताको मेशिनबाट एकैपटकमा धेरैप्रति फोटोकपी गर्न सकिने भएकाले यसको मूल्य बढी पर्छ ।
‘अहिले फोटोकपी मेशिनको व्यवसाय ५० प्रतिशतले बढेको छ,’ सागर इन्फोसिसका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेव लाखेले भने । अफिसियल या निजी कार्यमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको प्रतिलिपिका लागि फोटोकपी गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यसको व्यवसाय बढेको उनले बताए । सागर इन्फोसिस नेपालका लागि ब्रदर्शको आधिकारिक विक्रेता हो । त्यहाँ ब्रदर्शको डिजिटल फोटोकपी मेशिनहरू उपलब्ध छन् । ब्रदर्शको नेपालभर ३ सय ६५ ओटा रिसेलर रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित अर्पण ट्रेडिङमा वर्षको ३ सय ओटा यस्ता मेशिन विक्री हुने गरेको छ । त्यहाँ उपलब्ध विभिन्न ब्राण्डका फोटोकपी मेशिनमध्ये ब्रदर्श, एचपी तथा जेरक्सको माग अत्यधिक रहेको अर्पण ट्रेडिङ प्रालिका विक्री प्रबन्धक नवराज आचार्यले बताए । फोटोकपी मेशिन अनिवार्य उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अर्पण ट्रेडिङ जेरक्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हो । अहिले इमेल तथा इण्टरनेटको प्रयोगमा व्यापकता आए पनि यो व्यवसायमा नकारात्मक असर नपरेको उनले बताए । अर्पणको नेपालभर जम्मा ५ ओटा रिसेलर छन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीका लागि पासपोर्ट बनाउनदेखि स्कूल तथा कलेजमा धेरैजनालाई एकैपटक प्रश्नपत्र बाँड्नसमेत फोटोकपी गर्नुपर्ने हुनाले यसको व्यवसाय बढेको हो,’ इण्टिमेट इण्टरनेशनलकी विक्रेता कुसुम चौधरीले बताइन् । बजारमा फोटोकपी मेशिनको मागसँगै व्यवसाय बढेको उनको भनाइ छ । उनको पसलमा विभिन्न मोडलमा यस्ता फोटोकपी मेशिनहरू उपलब्ध छन् । आफ्नो पसलबाट वर्षको १ सय ५० ओटा यस्ता मेशिन विक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् । हाल नेपालमा क्यानोन, ब्रदर्श, जेरक्स, मिटा, रिको, मिनोल्टा, नसुटेक, सामसुङ्लगायत ब्राण्डका फोटोकपी मेशिनहरू उपलब्ध रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सुपमा टेलिकमको बक्यौता साढे नौ करोड
भदौ ३१, धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम (सुप)मा नेपाल टेलिकमको बक्यौता झण्डै साढे ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । टेलिकम सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय अत्तरियाले गत जेठ मसान्तसम्म यस क्षेत्रका सबै जिल्लाको बक्यौता रू. ९ करोड ३७ लाख पुगेको बताएको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, सबभन्दा बढी बक्यौता सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरूको बक्यौता झण्डै रू. ६ करोड रहेको कार्यालयकी सहायक लेखा अधिकृत शीला भण्डारीले बताइन् । बक्यौतामध्ये पीएसटीएन र भिस्याटको मात्रै रू. ६ करोड ७८ लाख र सीडीएमए फोनको रू. २ करोड ५९ लाख १६ हजार रहेको छ । टेलिकमको धनगढी कार्यालय मातहत रू. ४ करोड ३७ लाख ६५ हजार र महेन्द्रनगर कार्यालयअन्तर्गत रू. ३ करोड ८३ लाख ८६ हजार बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै दिपालय कार्यालय मातहत रू. १ करोड १५ लाख ४८ हजार रहेको क्षेत्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सुप क्षेत्रीय कार्यालयले यिनै तीन कार्यालयमातहत अन्य शाखाहरूलाई गाभेको छ । कैलालीका सम्पूर्ण फोन लाइनहरू धनगढी लेखा कार्यालयमातहत र महाकालीका चारओटै जिल्लाका लाइनहरू महेन्द्रनगरमातहत राखिएका छन् । यसैगरी सेती अञ्चलका कैलालीबाहेक सबै पहाडी जिल्लालाई दिपायल लेखा कार्यालयअन्तर्गत राखिएको क्षेत्रीय कार्यालयले बताएको छ ।
भदौ ३१, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता शनिवारदेखि शुरू भएको छ । रोटरी क्लब अफ काठमाडौंद्वारा आयोजित सो प्रतियोगितामा उपत्यकाका विभिन्न २० विद्यालयका ६० विद्यार्थीले भाग लिएका छन् । ‘शान्ति र समझदारीका लागि चित्रकला’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको सो प्रतियोगितामा आठ जना बहिरा विद्यार्थी पनि सहभागी छन् ।
रोटरी क्लबका कार्यक्रम संयोजक नारायणकृष्ण खरेलले प्रतियोगिताको शुभारम्भ गरेका थिए । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ३० ओटा चित्रलाई छनोट गरी जापानस्थित रोटरी क्लब अफ ओसिगायामा हुने अन्तरराष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनीमा पठाइने संयोजक खरेलले जानकारी दिए ।
‘रुबिकोन’ प्रयोग गर्दै आईएलएफसीओ
वित्तीय संस्था इण्टनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड (आईएलएफसीओ) ले नेपच्युन सफ्टवेयर प्रालिद्वारा विकसित नेटवर्किङ सफ्टवेयर ‘रुबिकोन’को प्रयोग शुरू गरेको छ । नेपच्युन सफ्टवेयर प्रालिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो सफ्टवेयरको प्रयोग ‘आईएलएफसीओ’का व्यावसायिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सहयोगी हुने र देशभरिका कारोबार सहजरूपमा गर्न गर्न सक्ने बताइएको छ । ‘रुबिकोन’ को प्रयोगले छोटो समयमै रकमको कारोबार कुनै पनि शाखाबाट गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘रुबिकोन’ एक अत्याधुनिक तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने नेटवर्किङ सफ्टवेयर भएको र यसले विश्वव्यापी बैङिकङ मापदण्डलाई पूरा गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा विश्व बैङ्कको सहयोग
नेपाललाई आगामी २ वर्षका लागि विश्व बैङ्कले नयाँ सहयोग रणनीति तयार पारेको छ । विश्व बैङ्कको मुख्यालय वाशिङटन डीसीमा बिहीवार भएको बोर्ड बैठकले नेपालको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनासँग मिल्नेगरी रणनीति तयार गरेको हो । विकास र गरीबी न्यूनीकरणका माध्यमबाट शान्ति कायम गर्ने नेपालको बलियो प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्नका लागि यस्तो निर्णयगरिएको विश्व बैङ्कले बताएको छ । यससँगै नेपालले आगामी २ वर्षा ४६ करोड डलर सहयोग पाउने बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरण हुँदाहुँदै पनि नेपालले सामाजिक विकासका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक प्रगति गरेको बैङ्कले ठहर गरेको छ । यससँगै विश्व बैङ्कले आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि अन्तरिम रणनीति नोट (आईएसएन) को समेत तयारी गरेको बताएको छ । देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै आईएसएनको तयारी गरिएको बैङ्कले बताएको छ ।
नियमित सहकारीको साधारणसभा
भदौ ३१, काठमाडौं (अस) । नियमित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दोस्रो वर्षको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । अवसरमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक पदमराज रेग्मीले सहकारीले वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सहकारीको पूँजी परिचालन र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित ढङ्गले लैजानुपर्नेमा जोड दिए । लक्ष्यअनुरूपको सफलता हात पार्न आफूहरू सफल भएको संस्थाका अध्यक्ष मीनबहादुर कुँवरले बताए । कार्यक्रम आर्थिक अभियान दैनिकका सम्पादक अच्युत वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो ।
संस्थाको चुक्ता पूँजी रू. १ करोड छ । गत आवको असार मसान्तसम्ममा संस्थाले रू. १ करोड ३६ लाख निक्षेप सङ्कलन र रू. १ करोड ७० लाख कर्जा लगानी गरेको थियो । सो अवधिमा संस्थाले रू. १० लाख खुद मुनाफा गर्न सफल भएको जानकारी गराइयो । सभाले गत आवको मुनाफाबाट आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संस्थामा १ सय ५३ शेयर सदस्य छन् ।
भारू अभावमा सटही काउण्टर बन्द
भदौ ३१, भैरहवा (अस) । भारतीय मुद्रा अभावमा रूपन्देही क्षेत्रका सटही काउण्टर बन्द हुने क्रम बढेको छ । रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा गरी ७१ ओटा सटही काउण्टर भए पनि ५० ओटा काउण्टरमात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क भैरहवा शाखाले जानकारी दिएको छ ।
पर्याप्त भारतीय मुद्रा नहुँदा सटही काउण्टरहरू बन्द हुने क्रम बढेको सिध्दार्थ मनी चेञ्जरका प्रोपाइटर हरि घिमिरेले बताए । ‘राष्ट्र बैङ्कले सातामा भारू ३० हजार मात्र दिने भएकाले सटही काउण्टरहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने ।
रियलको सातौं हप्ता विजेता घोषणा
रियल क्वालिटी टूर कण्टेष्ट, २०११ को सातौं हप्ताको विजेता घोषणा गरिएको छ । यो हप्ता सबैभन्दा बढी सही उत्तर भएको एसएमएस पठाएर असन बाङ्गेमुडाका रवीन्द्र शाक्य (मोनं ९८५१०९०३५४) विजेता बनेका छन् । उनले सिमरास्थित डाबर रियल फ्याक्ट्री र पोखराको ३ दिन २ रातको क्वालिटी टूरमा जाने मौका पाएको रियलको उत्पादन कम्पनी डाबर नेपालले जानकारी दिएको छ ।
१२ हप्तासम्म सञ्चालन हुने यस टूर कण्टेष्टका विजयी ग्राहकलाई पोखरा तथा रियल जुसको फ्याक्ट्री भ्रमणका लागि लगिने डाबर नेपालले बताएको छ ।
हात चिलायो, हिमष्टारले उपहार ल्यायो
हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले दशैंतिहारको अवसर पारी ‘हात चिलायो, हिमष्टारले खुशीयाली ल्यायो’ उपहार योजना ल्याएको छ । दशैंतिहारको अवसरमा नयाँ सामान खरीद गर्न इच्छुक ग्राहकलाई ध्यानमा राखी यो योजना ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । योजनाअन्तर्गत हिमष्टारको टीभी, रेफ्रिजेरेटर र डीप फ्रीज खरीदमा उपलब्ध कुपनबाट हिमष्टारको रेफ्रिजेरेटर, एलसीडी, डीभीडी, एलईडी लाइट जित्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न साइकल र्याली
भदौ ३१ काठमाडौं (अस) । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंको वसन्तपुरदेखि भक्तपुर दरबार क्षेत्रसम्म साइकल र्याली गरिएको छ । ‘काठमाडौं ईको राइड’ नामक दिइएको सो र्याली विश्व पर्यटन दिवस सेप्टम्वर २७ को सन्दर्भमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आयोजना गरिएको आयोजक संस्था पर्यटन पत्रकार सङ्घ (जाट नेपाल)ले बताएको छ ।
उपत्यकावासीलाई साइकलप्रति अभिरुचि बढाउन पनि र्याली आयोजना भएको सङ्घले बताएको छ । वातावरण जोगाउनको लागि पनि साइकल चढ्नु आवश्यक भएको वातावरण मन्त्री हेमराज तातेडले बताए । शनिवार भएको साइकल र्याली उद्घाटन गर्दै मन्त्री तातेडले सवारी प्रदूषण नियन्त्रका लागि राजधानीवासीले साइकलप्रति रुचि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री तातेडले वसन्तपुर कुमारी घरदेखि नयाँसडक जुद्ध शालिकसम्म र्यालीमा सहभागी भएका थिए । पर्यटनको प्रवर्द्धन र वातावरण जोगाउने अभियान लिएर भएको साइकल र्याली शहरवासीका लागि प्रेरणा भएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए । पर्यटकीय गन्तव्यको महत्त्व दर्शाउन तथा कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न साइकल र्यालीले टेवा पुर्याएको भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिवनचन्द्र धौभडेले बताए । र्यालीको स्वागतमा समतिले विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएको थियो ।
र्यालीमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह, साइकल सीटी २०२०, पर्यटन पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो । साइकलबाट विश्व यात्राको तयारीमा रहेका साइकलयात्रीद्वय राजेन्द्र सापकोटा र रूपक खड्काको हौसलाका लागि शहरवासीले साथ दिनुपर्ने जाट नेपालका उपाध्यक्ष देवीप्रसाद पन्तले बताए । सापकोटा र खड्काले सन् २००९ मा सार्क राष्ट्रको साइकल यात्रा गरिसकेका छन् । नेपालको पर्यटन र वातावरणीय प्रभावको बारेमा विश्वसमूदायमा जानकारीका दिन साइकलयात्रा गर्न लागेको यात्री सापकोटाले बताए ।
राप्तीमा पहिलो संविधानसभा केन्द्र स्थापना
दाङको तुलसीपुरमा अञ्चलस्तरीय संविधानसभा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यो राप्तीकै पहिलो संविधानसभा सूचना केन्द्र हो । संविधानसभा सचिवालय र नेपाल कानून समाज, दाङको पहलमा उक्त केन्द्र स्थापना भएको सूचना केन्द्रका फोकल पसन पद्म वैदिकले बताए । उनका अनुसार सूचना केन्द्र शनिवारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि राप्तीका दाङ, रुकुम, रोल्पा, सल्यान र प्यूठान जिल्लाका जनताले संविधानसभामा भइरहेका संविधान निर्माणका दैनिक क्रियाकलाप र कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी पाँचओटै जिल्लाका जनताले संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव संविधानसभा सचिवालयलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सर्वसाधारणहरूलाई संविधान निर्माणका लागि सुझाव दिन सजिलो होस् भनेर पाँचओटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम लैजाने पनि केन्द्रले बताएको छ । वैदिकका अनुसार सङ्कलित सुझावलाई दैनिक रूपमा फोन, फ्याक्स र इमेलमार्फत संविधानसभा सचिवालयमा पठाइनेछ । सर्वसाधारणले सूचना केन्द्रमा नै आएर सुझाव दिन सक्ने पनि केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
६ महीनाका लागि तुलसीपुरमा मासिक ५ हजार रुपैयाँमा घरभाडा लिएर स्थापना गरिएको सो केन्द्रको नियमित सञ्चालनका लागि एक जना फोकल पसन र एक जना जनसम्पर्ककर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना केन्द्रमा संविधान निर्माणका क्रममा आएका विषयगत विवाद, विभिन्न ११ विषयगत समितिले संवैधानिक समितिमा पठाएका प्रतिवेदनलगायत जानकारीमूलक सामग्रीहरू राखिनेछन् । दाङसहित नेपालमा १४ स्थानमा यस्ता सूचना केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । सूचना केन्द्रले एकातिर संविधान निर्माणमा भएको अन्योलबारे बुझ्न सर्वसाधारणलाई सजिलो बनाउनेछ भने अर्कोतिर संविधान निर्माणमा विवादित मुद्दालाई समाधान गर्न जनताको सुझाव संविधानसभा सचिवालयमा पुर्याएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सघाउने अपेक्षा राखिएको छ । ‘जनताका सुझावहरू लिखित र मौखिक दुवै माध्यमबाट संविधानसभा सचिवालयमा पठाउछौं,’ फोकल पसन वैदिकले भने ।